संस्कृतिसम्बन्धी सिनेमाको अन्तराष्ट्रिय बजार सम्भव छ : नायक गोपीलाल तामाङ
काठमाडाैं । नायक गोपीलाल तामाङको अहिले आफ्नै लेखन, निर्माण र निर्देशन रहेको तामाङ कथानक चलचित्र ‘बुम्बा’ प्रदर्शनमा आईसकेको छ । प्रविधि निर्देशकको रुपमा ‘मयुङ–बुरीङ’ चलचित्रमा प्रवेश गरेका मेलुङ गाउँपालिका– ३, दोलखाका तामाङले सोही चलचित्रबाट अभिनय यात्रा आरम्भ गरेका थिए । त्यसपछि उनले ‘म्हेन्दोला माया’, ‘दुःखीला कर्म’, ‘जामे’ र ‘बुम्बा’मा मुख्य पात्रको भूमिकामा अभिनय गरि सकेका छन् । अभिनयमा आउनु पूर्व उनी छायाङ्कनमा संलग्न थिए । उनले थुप्रै तामाङ र नेपाली फिल्महरुको छायाङ्कन गरेका छन् । उनले छायाङ्कन गरेका तामाङ चलचित्रहरु ‘म्हेन्दोला माया’, ‘दुःखीला कर्म’, ‘जामे’ र ‘जा थेबा’ रहेका छन् भने ‘रात’, ‘दलन २’, ‘सम्बन्ध’, ‘गुनासो’, ‘रेवती’, ‘मिस कल’, ‘कथा एकरात’, ‘पाहुन’, ‘संगम’, ‘जिन्दगीको यात्रा’, ‘ठागु’लगायत छन् ।
तामाङ चलचित्रमा आरम्भदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा के के परिवर्तन पाउनु भयो ?
खासै त्यस्तो परिवर्तन केही आएको छैन । चलचित्र निर्माणको बाढी भने आएको छ ।
संस्थागत विकास हुन नसक्नुको कारण के हो ?
तामाङहरु आफूले आफैलाई ठूलो ठान्नु तामाङ चलचित्रको संस्थागत विकास नहुनुको मूल कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ । चलचित्र निर्माण गर्दा धेरै भन्दा धेरै अध्ययन र छलफल गरेर गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो । तर, हामी त्यसो गर्दैनौ । अझ एकले अर्काको कुरा काट्ने मात्र नभई अर्को पक्षले निर्माण गरेको चलचित्र नै हेर्दैनन् ।
तामाङ सामाजिक–सांस्कृतिक द्वन्दलाई चलचित्रमा किन समेट्न सकिएन ?
सांस्कृतिक परम्परालाई हेर्ने हो भने तामाङ सबैभन्दा अगाडि नै होला । तामाङ संस्कृति माथि सिनेमा बनाउने हो भने त्यसको बजार राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा पनि सम्भव छ । तर, निर्माताहरु लगानी उठाउन सकिदैन भन्ने डरले यस्तो चलचित्र निर्माण गर्न चाहदैनन् । यो पक्ष राम्रो होइन । अब हामीले यस्तो चलचित्र निर्माण तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।
ऐतिहासिक तामाङ चलचित्र किन बन्न सकेन ?
ऐतिहासिक तामाङ चलचित्र बन्ने क्रममा छ । मलाई लाग्छ तपाईले खोजे जस्तो अब छिट्टै बन्ने छ ।
चलचित्र ‘बुम्बा’ कस्तो चलचित्र हो र बजार कस्तो रह्यो ?
मेरो आफ्नै निर्माण र निर्देशन रहेको चलचित्र बुम्बा अध्याधिक दर्शकले मन पराएको चलचित्र हो । चलचित्र बुम्बा तामाङ चेलीको इच्छा विरुद्ध गरिने उत्पिडन र विभेदको कथा हो । जहाँ शिक्षाको आवाज उठाइएको छ भने चेलीबेटी बेचविखनको विषयलाई उठान गरिएको छ । साथै तामाङको परम्परागत विवाहको संस्कृतिलाई जोडदार प्रस्तुत गरिएको छ ।
तामाङ चलचित्रको दर्शक बढाउन के के सुधार गर्नुपर्छ ?
अहिले अधिकांश तामाङ चलचित्रहरु च्यारिटी सोमा मात्र सीमित छन् । धेरै दर्शक माझ पुर्याउनका लागि तामाङ चलचित्र सिनेमा हलहरुमा प्रदर्शन गर्नु पर्छ ।